Gen Z ၏လျှို့ဝှက်လိင်ဆက်ဆံမှုဘဝများ - သူတို့၏ 'လိင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း' နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုသည်မတိုးနိုင်ပါ။ ဒေါက်တာ Matthew Berry ။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဂျဲနီ Valentish (byမူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်) - မှတ်ချက်များ YBOP: porn-သွေးဆောင် ED ဒေါက်တာ Berry ဟာကိုကြည့်ပါ။
ယခုလက်ရှိအသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Gen Z သည်အသက် (၂၄ နှစ်) ရှိသေးသည်နှင့်အမျှမနုropဗေဒဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသည်နောက်ဆုံးတွင် smashed-avocado set နှင့် Zeds ၏လျှို့ဝှက်ဘဝများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
သူတို့ရဲ့အလေ့အထကျောင်းကိုမှာမိမိ clueless ရွယ်တူချင်းဆင်တူသည်ပညာကိုထုတ်သတ်တဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်သည်သူတစ်ဦးလိင်ကုထုံး (အဆုံးစွန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး-X ကိုမင်းသမီး, ဂေလီယန်အန်ဒါဆင်) ၏သားတွေအကြောင်း, သစ်ကို Netflix ဟာဆယ်ကျော်သက်ဟာသ, လိင်ပညာရေးအတွက်အဏုအောက်မှာရှိပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာကြည့်ရှုသူလည်းတစ်ဦး overactive ပေးနေရတာကိုတုံ့ပြန်မှု, လက်စားချေ porn နှင့်ကတ်ကြေးသွားလာ, ကွန်ဒုံးအပေါ်ချပြီးအကြောင်းကိုသိတော့ ... သူတို့ဖို့လိုအပ်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ takeaway မရှိသလောက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး-Z ကိုလိင်ရှုပ်ထွေးပြီးမတူညီကြောင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
'sexless' Gen-Z ကိုကျော်လွန်သွားခြင်း
ဒါက Gen-Z လိင်ဘဝတွေကိုရုတ်တရက်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှပါ အစီရင်ခံစာများ နှင့် လေ့လာမှုတွေ ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး Z ကိုယခင်အစဉ်အဆက်ထက်လိင်ရှိသည်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်ကိုရှာပါ။
ဒီမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Z ကိုလည်းချွတ်ရဖို့အပေါ် switched ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများက Courier Mail ကဲ့သို့သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် Gen-Z သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ပါတီပွဲသို့တက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည် Louis CK ထက်အနည်းငယ်သာယဉ်ကျေးသော (“ ဘာကြောင့်သူတို့ Baby Boomers လိုပျော်စရာကောင်းတာလဲ?”) ။ အများကြီး-ဝေဖန်တစ်ကျော့ပြန်ဟာသအစုံသူကယနေ့ကလေးများကိုသူတို့အချိန်မတိုင်မီအိုမင်းရင့်ရော်ပြီး“ အချင်းချင်းလက်ချင်းချိတ်။ Jell-O ရိုက်ချက်များလုပ်သင့်သည်” ဟုဆိုသည်။
လိင်ပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဖြစ်ပါတယ် - အမြဲတမ်းရရှိနိုင်
ဒါကြောင့် Gen Zs ကလိင်ဆက်ဆံမှုနည်းနေတာလား။ Melbourne စိတ်ပညာရှင် Dr. Matthew Berry က“ လိင်မှုကိစ္စကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြန်သည်ကိုသင်လက်ခံလျှင်မဟုတ်ပါ။
သူကဆက်ပြောသည်မှာအသက်ကြီးသူများသည်လိင်ဟောင်းကိုလိင်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့် Gen Z သည်လိင်အသစ်ကိုလိင်အသစ်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး။ ။ မျိုးဆက်တိုင်းတွင်စာနည်းနည်းရေးသည်နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနည်းသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးစတိုင်သည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။
"အလားတူပင်၊ Gen Z သည်လူတစ် ဦး ချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုနည်းသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
"သူတို့က ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ မှာအဝတ်အချည်းစည်းတွေ Snapchatting လုပ်တာကြောင့်သူတို့ဟာပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံတာပါ"
ဒေါက်တာ Berry သည်စိတ်နှိုးဆွမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး - အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှဆင်းသက်လာသည့် dopaminergic မျိုးစိတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုမှဆင်းသက်လာသည့် serotoninergic မျိုးကိုခွဲခြားဖော်ပြသည်။ “ လူငယ်အများစုဟာဒီလိုရင်းနှီးမှုမျိုးကိုမကြုံဖူးကြဘူး။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူသည်လက်တွေ့ဘ ၀ အခြေအနေများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားနေရသောလူငယ်ဖောက်သည်များစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
လူကိုယ်တိုင်လိင်နှင့်မတူဘဲအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကို Snapchatting ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်စေ၊ Tinder သို့မဟုတ် Grindr profile များကို ဖြတ်၍ ဖုတ်ကောင်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေအဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဒေါက်တာ Berry ကပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်စဉ်ဆက်မပြတ် dopaminergic ဆုလာဘ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောကြောင့်ရလဒ်မှာလှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Instagram ကိုဖြတ်ပြီး Scroll လုပ်ပါ။ Kardashian ခါးလေ့ကျင့်သူများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုများစွာပေးဆပ်ရသောငယ်ရွယ်သောလူငယ်များစွာ၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများနှင့်အတူ "sexless" Gen Z ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိနေသောအခြေအနေကိုစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။
လိင်နှင့်လိင်မဂ္ဂဇင်း Archer ၏အယ်ဒီတာချုပ် Adolfo Aranjuez က“ Neoliberalism သည်ယခုအခါသင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာစွာစွဲစွဲမြဲမြဲစွဲစွဲမြဲမြဲစွဲစွဲမြဲမြဲစွဲစွဲမြဲမြဲရှိနေပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုသည် Gen Z ၏အမှတ်တံဆိပ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Aranjuez က“ လိင်ရောင်းချမှုကြောင့်သင်သည်ဤလိင်မှုကိစ္စကိုမွေးမြူရန်လိုအပ်သည်။
Gen Zs သည်ချက်ချင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့်ကွင်းဆက်လောကတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူတို့၏မိဘများသည်တုန့်ပြန်မှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သူတို့ကြီးလာသောအခါမှတ်ချက်များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအတည်ပြုရန်ကြိုက်သည်။ ဒါ့ကြောင့်အလွန်ပျံ့နှံ့နေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။
ဤသည် Gigi Engle, အပတ်စဉ်ရှိပါတယ်သူတစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်နည်းပြများနှင့်ပညာပေးစိုးရိမ် အကြံဉာဏ်ကိုကော်လံ.
“ အတည်ပြုချက်ဟာယောက်ျားလေးတွေကသင်နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်သလားဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောထားတွေနဲ့လိင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တွေ့ရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအလယ်တန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအရာဝတ္ထုတွေပတ် ၀ န်းကျင်မှာပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့သူတို့ထင်နေကြတဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာရှိနေဆဲပါ။ အလိုရှိသည်။ "
66 နှင့် 16 နှစ်ကြားဗိုလ်ချုပ်ကြီး Zs ရာခိုင်နှုန်း 22 ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်စဉ်းစားပါ သီးသန့်လိင်ကွဲ - မည်သည့်မျိုးဆက်သစ်များ၏နိမ့်ဆုံးကိန်းဂဏန်း - ထို 2018 Ipsos Mori အစီရင်ခံစာအရသိရသည် မျိုးဆက် Z ကို၏ဘဝအသက်နှင့်ရွေးချယ်မှု: Binary ကျော်လွန်.
သုတေသီဟန္န Shrimpton သည်ဤရလဒ်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဆင်းဝိသေသလက္ခဏာကိုစူးစမ်းဖို့နုပျိုအလိုဆန္ဒမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
LGBTQ + ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပိုမိုလက်ခံလာခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်များသည်ယခင်မျိုးဆက်များနည်းတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ binary မဟုတ်သောအမြင်များရှိရန်ဖြစ်သည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Berry ကသူ၏ဖောက်သည်များနှင့်လိင်မှုပြေလည်မှုအကြောင်းပြောဆိုမှုများစွာရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ သူတို့ကလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုမကြောက်ဘူးလို့ထင်တယ်။
“ ငါစကားပြောတဲ့လူငယ်တွေလိင်တူချစ်သူဘားတန်းကိုမသွားကြဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ 'မင်းကယောက်ျားတွေလားမိန်းကလေးလား' ဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲ။ 'နင့်ကိုနီရဲရဲလား၊